Imindeni yesaba ukuthi izithandani ezilahlekile zithunjiwe | Scrolla Izindaba
Imindeni yesaba ukuthi izithandani ezilahlekile zithunjiwe
Imindeni emibili ilwela ukuthola ukuqonda ngokunyamalala kukaMohloki Rahi nentombi yakhe uTshepang Thakathayo.
“Ngicabanga ukuthi indodana yami nentombi yakhe bathunjiwe,” kusho ubaba kaMohloki, uPhoka Rahi etshela abakwa-Scrolla.Africa.
Lezi zithandani, zombili ezineminyaka engama-28, kubikwe ukuthi zalahleka ngeviki eledlule ngoMsombuluko eZamdela ngase-Sasolburg e-Free State.
URahi uthe ngesikhathi engezwa lutho oluphima kundodana yakhe, bahamba bayomhlola kodwa wayengekho emjondolo wakhe. Indawo yayilahliwe kodwa izinto ezibalulekile njengemabonakude zazisekhona.
“Kubukeka sengathi kukhona umuntu obefuna okuthile,” uyasho.
“Bekungekho okukhombosayo ukuthi kungenwe ngenkani. Imoto yentombi yakhe yayingakho. Ngithandazela ukuphepha kwabo.”
Udadewabo omdala kaTshepang, uJennet, oneminyaka engama-29, uthe wakhathazeka ngesikhathi uTshepang engamshayeli ucingo ngosuku olwandulela unyaka omusha.
“Ngibonile ukuthi ubengekho naku-inthanethi ezinkundleni zokuxhumana futhi bengazi ukuthi kukhona okungahambi kahle. Ngiyethemba udadewethu uphilile futhi sizophinde sihlangane,” kusho uJennet.
Ubaba okhathazekile unxuse noma ngubani okungenzeka ukuthi ubone indodana yakhe ukuba ashayele amaphoyisa noma amuthinte kule nombolo: 078 811 4182.
Okhulumela amaphoyisa u-Brigadier uMotantsi Makhele uthe amaphoyisa acela usizo ukuthola lezi zithandani ezilahlekile.
“Bagcine ukubonakala ngomhla zingama-28 kuZibandlela ngabo-10 ekuseni. Lezi zithandani kuthiwa zaya kubo kamama kamfana e-Taaibos ziyofuna ukudla zaze zaya ekhaya lazo e-Mooidraai, zihamba nge-Polo esiliva enezinombolo zokubhalisa zase-Lesotho. Bagcine lapho ukubabona.